Global Voices teny Malagasy » Manohitra Ny Famoretana Ataon’ny Governemanta Sy Ny Fitsaratsaram-poana Ataony An’ireo Fikambanana Tsy Miankina Ireo Azerbaijani Mafana Fo, · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Desambra 2017 7:14 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Zon'olombelona
Shanin Javadov [eo afovoany] no mpanorina sy mpitantana ny Sendikan'ny Mpiasan'ny Fanorenan-trano ao Gabala,ao Azerbaijan. Miompana indrindra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa eny anivon'ny vondron'olona ifotony io Fikambanana io. (Sary nalain'i Shanin Javadov).
Ity lahatsoratra ity dia fiarahamiasa  avy amin'ny EurasiaNet.org,  nosoratan'i Durna Safarova . Nahazoana alalàna ny famerenana mamoaka azy.
I Shahin Javado dia avy amin'ny taranakà “rouser “.
Namono nahafaty Kolonely Rosiana tao Gabala ny Rain'ny Raibeny, heloka izay nahatonga ny razambeny ho natao sesitany tany Siberia. Ary vao tamin'ny taona 1917, taorian'ny Revolisiona Bolshevik ny fianakaviany vao nahazo niverina tao Azerbaijan. Nisy fianakavian'izy ireo koa nalefa tany Siberia ny tapaky ny taona 1937 tamin'ny andron'ny famoretan'ny Sovietika nohon'ny fanohanana ampahibe-maso an'i Nariman Narimanov, ilay Azerbaijani revolisionera Bolshevik malaza no sady mpanoratra.
“Araka izany, nobeazina tao anatin'ny hevitra hiady hanoherana ny tsy rariny aho”, hoy i Javadov.
I Javadov,52 taona, mpanorina sy mpitantana ny Sendikan'ny Mpiasan'ny Fanorenan-trano ao Gabala. Manana mpikambana eo amin'ny 2000 eo, io no iray lehibe indindra amin'ireo fikambanana tsy miankina (ONG) amin'ny fanjakana ao Azerbaijan.
Taona maro lasa izay, nofaizin'ny governemanta ao Azerbaijan ny sehatry ny fiarahamonina sivily, indrindra tamin'ny fameràna ny vola fanampiana avy any ivelany, izay nahatonga fikatonanà fikambanana tsy miankina fanta-daza maro tao amin'ny firenena.Tamin'ny volana Aogositra, nanambara ny sampan'asa avy amin'ny Transparency International (Fangaraharana Iraisam-pirenena) fa efa ambavahaonan'ny fikatonana izy, izay nahatonga ireo rantsam-pikambanana hafa teo an-toerana nametra-panontaniana ny amin'ny tsy nahavitàn'ireo fikambanana mandray famatsiambola iraisam-pirenena  nitondra fiovàna manandanja tao Azerbaijan.
Endrika hafa amin'ny fikatrohan'ny fiarahamonina sivily no asehon'i Javadov : ireo vondron'olona ifotony, ny mpilatsaka an-tsitrapo, ny mponina eo an-toerana. Misahana manokana ny zon'ny mpiasa ilay sendikà, miaro ireo mpiasa izay tsy nomen'ny mpampiasa azy ireo ny karamany. Mandresy lahatra amin'ireo tetikasam-pananganana mitondra vahiny avy any ivelany koa izy mba ho mponina avy ao an-toerana ihany no alaina hamita ny asa. Ary nanomboka ny taona 2011 izy dia nanonta ilay Gazety atao hoe Qızıl Alma (“Paoma Volamena” amin'ny fiteny Azeri), gazety mpiseho isambolana ahitàna pejy miisa 6 iresahana indrindra ny politika sy ny kolikoly ao anivon'ny governemantan'ny faritra misy azy sy manerana ny firenena. Javadov sy mpilatsaka an-tsitrapo maro no mizara azy io eny an-dalambe, eny amin'ny hotely fisotroana dite ary eny amin'ireo toerana hafa natao ho an'ny daholobe.
“Mbola manatona ahy ny olona ary mizara ny olan'izy ireo, izaho kosa miezaka manoro azy ireo ny birao tokony halehany, toy ny mpanelanelana,” hoy i javadov “Ny zava-dehibe indindra ny hahafahan'ny firaisankinan'ny olontsotra ho afaka hitaky ny zon'izy ireny sy hiady hatrany hahazoana izany.”
Ho an'ny ankamaroan'ny olona ao Azerbaijan, endrika ivelany fotsiny ihany no fiantraikan'ny fiarahana amin'ireo fikambanana tsy miankina satria ny avy any ambony no mikarakara azy ho aty ambany, avy amin'ireo mpanohana Iraisam-pirenena, fa tsy hoe naorin'olontsotra, hoy Cabir Aliyev, Manampahaizana manokana miasa miaraka amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena isankarazany.
“Tranga tsy fahita firy ny an'i Shahin Javadov” hoy i Aliyev. “Ny olona efa zatra miaraka miasa amin'ny mpamatsy vola matetika mahay ny fomba ahazoana vola, fa tsy manao zavatra ho an'ny fiarahamonina toy ny ataon'i Javadov.”
Manana fijery matroka mikasika ny ankamaroan'ireo fiarahamonina sivily ao Azerbaijan ihany koa i Javadov. “Amiko, tsy hitako izay maha-samihafa azy na misy na tsia ireo fikambanana tsy miankina. Mitovy amin'io governemanta io ihany ny ankamaroan'izy ireo”, hoy izy. “Raha te hiara-hiasa amin'olontsotra ny fikambanana tsy miankina, dia tokony hovolavolain'ny olontsotra, tokony hiaina tahaky ny olontsotra.”
“Mety ho ratsy fijery ihany aho angamba, kanefa ny zavatra hitako nandritry ny androm-piainako dia matetika voavidy vola ihany amin'ny farany ny ankamaroan'ireo mpitolona ho amin'ny demokrasia sy ny fahalalahana,” Mbola nampiany hoe. “Izay no antony tsy itokisan'ny olontsotra ireo mavitrika amin'ny resaka politika.”
Nanamarina ny antony famoretana ataony amin'ireo fikambanana tsy miankina vatsian'ny fikambanana avy any ivelany vola ny Governemanta, tamin'ny filazàny fa ilaina ny miaro an'i Azerbaijan amin'ny mety ho dindo sy fampitahorana avy any ivelany..
Indrisy tsy nahomby ilay Sendikan'ny Mpiasan'ny Fanorenan-trano ao Gabala, na tsy nahazo famatsiambola, avy any ivelany na avy ao an-toerana, ary na fitantanan'olona tsara sitrapo tanteraka aza no manodina ilay fikambanana. Mbola nolavina ihany koa ny fanoratana ara-panjakana azy.
Efa nigadra dimy andro koa i Javadov tamin'ny taona 2011 izay nolazainy fa fiampangana diso azy ho nanao herisetra; Nihevitra i Javadov fa ny tena heloka nataony tamin'izany dia ny famoahana lahatsoratra mamely an'Ingahy Ramiz Mehdiyev, mpanolotsaina hatry ny ela ny Filoha Ilham Aliyev.
“Tsy misangy mihitsy ny Governemanta raha vao resaka fanoherana, indrindra avy amin'ny Fiarahamonina,” hoy i Javadov. “Ondrankondrafana daholo izay olona rehetra manana fifandraisana amin'ity governemanta ity ary mamely ireo fikambanana tsy miankina, olontsotra, na fandraisana andraikitra heveriny fa mety hanohintohina azy. Mitovy avokoa rehefa fitondrana tsy refesi-mandidy rehetra : heverin'izy ireo fa fifanarahana bitika kely iray dia ampy hanokatra varavarana lehibe ho amin'ny hetsi-panoherana lehibe tsy hay tohaina.”
Manindrahindra an'i Javadov ampahibe-maso, anefa, ny Fitondràna. “Tena fantadaza sy hajain'ny olona tokoa izy eto Gabala,” hoy i Damir Bagirov, mpikambana ao amin'ny filankevitry ny Distrikan'i Gabala. Mpiray tanindrazana mafana fo mitondra zavatsoa ho a'ny fiarahamonintsika tokoa izy.” Gabala koa no anaran'ilay foibe ara-pitantanan'ny distrika izay mitovy anarana aminy, ao avaratr'i Azerbaijan.
Tsy nahazoany tombotsoa ara-materialy firy ny fikatrohana sivily nataon'i Javadov. Tsy an'asa izy nandritry ny taona roa sy tapany, ary ny karama maha-mpampianatra raisin'ny vadiny no niveloman'izy sy ny ankohonany – izay ahitàna zaza roa, 8 sy 10 taona. Manana tokotany lehibe izay amboleny sakafo ho azy ireo ihany koa io ankohonana io, mikasa ny hiompy ondry vitsivitsy ihany koa izy ireo atsy ho atsy.
Nilaza izy fa tsy mbola very fanantenana ny amin'ny fanampiana ho fitondràna fiovàna ao Azerbaijan, kanefa manahy ihany izy.
”Ny lalam-pitolomana rehetra hitantsika any amin'ny firenena Demokratika hafa, dia mihidy ato Azerbaijan,” hoy izy. “Fifidianana? Tsia. Tany tàn-dalàna? Tsia. Hevitry ny mponina? Tsia. Tsy miantehitra amin'ny vahoakany ny governemanta. Izany no ilazàna fa tsy mety ny fampiasàna ireo zonao araka ny Lalàm-panorenana sy ny fanaovana fikatrohana, izay no tena zava-misy.”
Nefa mbola mikasa ny hanohy ny fiainana amin'ny maha mpikatroka ihany izy ary hanonta ny gazety Qizil Alma. “Sady sarotra ho ahy koa ny hahita asa amin'izao. Ny fitokisan'ny olona no zavatra tokana hany mba azoko,” hoy ihany izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/20/111131/
 tsy nahavitàn'ireo fikambanana mandray famatsiambola iraisam-pirenena: http://www.eurasianet.org/node/85501